Ny valiny ara-bola an'ny Q3 2018 an'ny Apple dia hatao amin'ny 31 Jolay | Avy amin'ny mac aho
Isaky ny telo volana, ny orinasa voatanisa rehetra dia manana adidy hampahafantatra ny tompon-tany rehetra momba ny laharan'ny orinasa tao anatin'ny telo volana lasa. Mandritra ireo karazana fampisehoana ireo dia mampahafantatra ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa ny orinasa volavola izay efa nananan'ny orinasa tamin'ny varotra vokatra sy serivisy.
Ny kaonferansa valim-pifidianana mifandraika amin'ny telovolana fahatelo an'ny Apple, izay mifanandrify amin'ny volana aprily ka hatramin'ny jona 2018, dia efa manana daty amin'ny kalandrien'ny tompon-trosa rehetra ao amin'ny orinasa. Ho ilay 31 ho an'ny volana Jolay 2 hariva Fotoanan'ny Pasifika / 5 ora atsinanana.
Tamin'ny fihaonambe farany momba ny valim-bola, izay natao tamin'ny 1 Mey, ny orinasa nanambara ny vola azo $ 61.100 miliara miaraka amin'ny tombom-barotra izay nahatratra 13.8 tapitrisa dolara taorian'ny fivarotana iPhones 52.2 tapitrisa, iPads 9.1 tapitrisa ary Mac 4.07 tapitrisa manerantany. Toy ny mahazatra, ny mpandalina dia efa nanomboka nanao ny faminaniany manokana, ny faminaniana fa, raha mitovy amin'ny tamin'ny telovolana teo aloha izy ireo, dia tsy hifandray amin'ny tarehimarika atolotry ny Apple antsika amin'ny 31 Jolay.
Araka ny filazan'ny mpandinika, ny tarehimarika izay hasehon'i Apple amintsika mandritra ity fihaonambe valim-panadinana ara-toekarena ity dia tsy mitovy amin'ny:
Fidiram-bola eo anelanelan'ny $ 51.500 miliara ka hatramin'ny 53.500 miliara dolara.
Tombontsoa azo eo anelanelan'ny 38 sy 38.5%
Ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola eo anelanelan'ny $ 7.700 miliara ka hatramin'ny $ 7.800 miliara.
Ny fandaniana hafa: 400 tapitrisa $.
Tombana hetra manodidina ny 14.5%.
Toy ny faritra rehetra, Apple dia handefa ny valim-panadinana valiny mivantana amin'ny alàlan'ny tranokalany ho an'ny mpampiasa vola. Avy amin'ny Actualidad iPhone dia hanome fandrakofana feno momba ilay hetsika izahay hampahafantatra anao ny fivoaran'ny fivarotana iPhone sy ny serivisy samihafa atolotry ny Apple ho an'ny mpanjifany rehetra ankehitriny, ary ny tsikelikely dia manomboka ampahany lehibe amin'ny orinasa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny valiny ara-bola Q3 2018 an'ny Apple dia hatao amin'ny 31 Jolay
Ny karatra SD manaraka dia hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny gigabyte iray isan-tsegondra